के हो पेप्टिक अल्सर ? समयमै उपचार गर्नु जरुरी -
के हो पेप्टिक अल्सर ? समयमै उपचार गर्नु जरुरी
१ जेष्ठ २०७८, शनिबार १८:५८ May 15, 2021 Kanchanpur KhabarLeaveaComment on के हो पेप्टिक अल्सर ? समयमै उपचार गर्नु जरुरी
यो ब्याक्टेरिया दिशा र फोहोर पानीबाट फैलन्छ । वर्षातको मौसममा दुर्गन्धको समस्या अरु मौसममा भन्दा धेरै हुन्छ । शारीरिक सक्रियता कम हुने र रोग प्रतिरोधी तन्त्रमा हुनेवाला परिवर्तन पनि यो ब्याक्टेरिया बनाउन सहायक हुन्छ । धेरै तारेका चिल्लो र मसालेदार खानाको साथै चिया कफीको धेरै सेवन गर्नाले पनि पेटमा एसिडको स्तर बढाउँछ । अल्सरको लक्षणमा एसिडिटी हुने, पेट फुल्ने, ग्याँस बन्ने, पखाला लाग्ने, कब्जियत, वान्ता हुने आदि प्रमुख हुन ।
नेपाललाई आपतकालीन सहयोगको खाँचो : विश्व स्वास्थ्य संगठन
बेलडाँडी: सशस्त्र प्रहरीद्धारा ब्राउन सुगर सहित शुक्लाफाँटाका एक जना पक्राउ
संसदीय विकास कोष कोरोनाविरुद्ध लगाउँ
१ बैशाख २०७७, सोमबार ०७:५६ April 13, 2020 Kanchanpur Khabar
माैसम : तराईका विभिन्न ठाउँमा चट्याङ, हावाहुरी र असिनासहित पानी पर्ने सम्भावना
१७ बैशाख २०७७, बुधबार ०९:४२ April 29, 2020 Kanchanpur Khabar
जन प्रतिनिधिद्वारा कञ्चनपुरआरक्ष पीडित माथी सौतेली व्यवहार
३ बैशाख २०७७, बुधबार ०८:५७ April 15, 2020 Kanchanpur Khabar
कोरोना भाइरस : १८ हजार बढी सशस्त्र प्रहरी फिल्डमा
१५ चैत्र २०७६, शनिबार १७:०७ March 28, 2020 Kanchanpur Khabar
१६ चैत्र २०७६, आईतवार १५:४६ March 29, 2020 Kanchanpur Khabar
कोरोनालाई जितेका कैलालीका युवकलाई प्रधानमन्त्रीको बधाई
८ बैशाख २०७७, सोमबार ०९:०८ April 20, 2020 Kanchanpur Khabar
२ बैशाख २०७८, बिहीबार २१:१७ April 15, 2021 Kanchanpur Khabar